Ikhaya » Irish Whiskey Izindaba » It sika International Irish Whiskey Day Landelayo ngoLwesibili 3rd Mashi 3/3
179 1 Irish Whiskey Izindaba, 1 Pooka Irish Whiskey, 2 Pooka Irish Whiskey, 3 Pooka Irish Whiskey, 4 Pooka Irish Whiskey, 5 Pooka Irish Whiskey
International Irish Whiskey Day, umkhosi waminyaka yonke international Irish Whiskey senzeka ngoLwesibili oluzayo 3rd Mashi – 3/3.
3 Mashi usuku kukhethwe uSuku International of Irish Whiskey imikhosi ngoba ngalokho okushiwo inombolo 3 e Whisky Irish futhi e-Ireland.
Whisky Irish kumele wavuthwa iminyaka emithathu ngaphambi kusengathiwa whiskey.
Inhloso ye-Irish Whiskey Day (obonwa International Days of the Year) ukuxhumanisa global Irish Whiskey zokuhlolwa ku Social Media usebenzisa i-hashtag #IrishWhiskeyDay. ngonyaka odlule 2019 Irish Whiskey Day yathela zokuxhumana ukufinyelela ka phezu 400,000.
Irish Whiskey Day 2019 yathela zokuxhumana ukufinyelela ka phezu 400,000
kuyinto Irish Whiskey Day 3rd Mashi ncamashi amasonto amabili ukuba usuku ngaphambi Day St Patrick sika, ngakho laba Irish Whiskey Usuku lomhlaba wonke “Phuza Sinomthwalo Wemfanelo” izenzakalo Tasting kukhona ithuba ekahle Irish Diaspora emhlabeni wonke ucije Irish Whiskey zokuhlolwa Amakhono kanye Ulwazi amasonto abo amabili kusengaphambili we international Day St Patrick sika imikhosi ku 17 Mashi.
Kwaziqondanela nje ukuthi, (abafundi bethu American) 3rd March noma 3/3 kulo nyaka futhi kuvumelana Super ngoLwesibili okhethweni US kaMongameli. Ngakho, sicela baphuze futhi bavote ngendlela efanele!
Thola ezinye Amacebo eziwusizo, amathiphu kanye neseluleko sendlela ukusebenzisa siqu Irish Whiskey zokuhlolwa umcimbi wakho ku http://IrishWhiskeyDay.com. Ngokwesibonelo, Sebenzisa 15ml ukuze 20ml izinyathelo okuphuza ngokunambitha amasampula wemfanelo.
Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe, ku-Irish Whiskey Day nezeluleko Wabasaqalayo ukusingatha kanye egijima siqu Irish Whiskey Day zokuhlolwa umcimbi wakho, ukubona http://IrishWhiskeyDay.com
Amathegi: International Irish Whiskey Daywhiskey IrishIrish Whiskey BlogIrish nogologo brandIrish nogologo usukuIrish nogologo ukumakethaIrish Whiskey zokuhlolwaIrish Whiskey zokuhlolwa MatIrish nogologo ezokuvakashaokusanhlamvu olulodwa nogologo IrishSingle Malt Irish Whiskeyimbiza olulodwa namanjeimbiza olulodwa namanje nogologo IrishStuart McNamaraSuper ngoLwesibili
Tag des irischen Whiskeys - International Irish Whiskey Day - 3. März Mashi 3, 2020 ngesikhathi 8:58 pm
[…] Stuart McNamara: It sika International Irish Whiskey Day Landelayo ngoLwesibili 3rd Mashi 3/3 – auf: irishwhi… (englisch) […]